SkyTeam dia miara-miasa amin'ny Habitat for Humanity of Greater Los Angeles amin'ny hetsika fananganana trano fialantsasatra
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » SkyTeam dia miara-miasa amin'ny Habitat for Humanity of Greater Los Angeles amin'ny hetsika fananganana trano fialantsasatra
Los Angeles, Kalifornia- Ireo mpilatsaka an-tsitrapo avy amin'ny SkyTeam, ilay firaisam-pitaterana an'habakabaka manerantany, dia niara-niasa tamin'ny Habitat for Humanity of Greater Los Angeles (Habitat LA), mba hanampy amin'ny fananganana tranokala any Long Beach, California.
Mpilatsaka an-tsitrapo maherin'ny 30 avy amin'ny Komitin'ny mpandrindra ny tsena any Etazonia (MCC) an'ny SkyTeam no nanatevin-daharana ny Habitat LA tamin'ny iraka nananganana trano ho an'ireo fianakaviana mendrika sy ambany karama ao amin'ny Greater Los Angeles Area.
Ireo mpirotsaka an-tsitrapo avy amin'ireo kaompaniam-pitaterana mpikambana 20 an'ny SkyTeam dia nanome ny fotoanany sy ny fahaizany mba hanampiana amin'ny fananganana trano efatra ao amin'ny tranokala fananganana Habitat any Long Beach, California. Ny asa ho an'ny ekipa dia misy ny asa fandrafetana, fandokoana ary ny tokontany.
Tsy ny MCC US an'ny SkyTeam ihany no nanome ny fotoanany, fa nanolotra vola ho an'ny Habitat for Humanity ho solon'ny fankalazana ny fialantsasatra fanao isan-taona.
Ny tranokala fananganana Habitat LA dia tokantrano tokana, misy rihana roa, trano 3 misy efitrano XNUMX izay hamidy amin'ireo fianakaviana mpiara-miasa izay nahatratra ny fenitra momba ny fahazoana alalana. Manome izy ireo hatsaràn'ny hatsembohana miampy ny fanoloran-tena ara-bola izay mamaritra ny iraka ataon'ny Habitat for Humanity amin'ny fanomezana tanana fa tsy tanana.
Momba ny SkyTeam:
SkyTeam no fiarahan'ny seranam-piaramanidina manerantany 20 Miasa ny zotram-piaramanidina mpikambana hanolotra dia tsy misy tohiny amin'ny tambajotran'izao tontolo izao midadasika. Afaka miala sasatra ny mpanjifa SkyTeam 600 + fialan-tsasatra rehefa mandeha izy ireo, mahazo ary manavotra ny Flyer Miles matetika. Ny mpanjifa SkyTeam Elite Plus dia afaka mahazo serivisy SkyPriority. ny 20 mpikambana dia: Aeroflot, Aerolíneas Argentina, Aeroméxico, Air Europa, Air France, Alitalia, China Airlines, China Eastern, China Southern, Czech Airlines, Delta Air Lines, Garuda Indonesia, Kenya Airways, KLM Royal Dutch Airlines, Korean Air, Middle East Seranam-piaramanidina, Saudia, TAROM, Vietnam Airlines ary Xiamen Airlines. Miarahaba antsika ny SkyTeam 730 mpanjifa an-tapitrisany isan-taona amin'ny mihoatra ny 16,609 sidina isan'andro mankany 1,074 toeran-kaleha any 177 firenena.
Momba ny toeram-ponenana ho an'ny maha-olombelona an'i Los Angeles Lehibe:
Ny Habitat for Humanity of Greater Los Angeles (Habitat LA) dia mampiaraka ny olona hanangana trano, fiarahamonina ary fanantenana. Amin'ny maha-mpanorina trano ambony tsy mitady tombombarotra any amin'ny faritra lehibe any Los Angeles misy naoty enina misimisy an'ny Charity Navigator 4-Star, ny Habitat LA dia niara-niasa tamin'ny mpilatsaka an-tsitrapo, mpanome ary tompon-trano Habitat hanangana, hanavao ary hanamboatra trano maherin'ny 1,300 eo an-toerana sy manerantany hatramin'ny 1990. olona an'arivony maro no niova vokatry ny fananana toerana mendrika sy takatry ny saina antsoina hoe trano. Ny tompon-trano fonenana dia manampy amin'ny fananganana ny tranony manokana ary mandoa trosa arahin'antoka. Amin'ny alàlan'ny fanohanana ny Habitat LA amin'ny alàlan'ny asa an-tsitrapo, fanomezana ary fanohanana trano mora vidy, ny tsirairay dia afaka manampy ny fianakaviana hahatratra ny fitoniana sy ny fizakan-tena ilain'izy ireo hananganana ho avy tsaratsara kokoa. Raha te hahalala bebe kokoa dia tsidiho www.habitatla.org
Horohorontany tany Ekoatora androany maraina: 6.0
Indostrian'ny fizahantany any Bali amin'ny endrika krizy lehibe noho ny fanafoanana ny sidina